🥇 ▷ Maxaa la sameeyaa markii habka com.android.phone uu joogsado? ✅
Maxaa la sameeyaa markii habka com.android.phone uu joogsado?
Waxaa jira waqtiyo aan la tirin karin markii isticmaaleyaasha Nidaamka Android ay tahay inay wax ka qabtaan farriinta naxdinta leh “Geedi socodka com.android.phone ayaa joogsaday.”
Farriintaani waxay badanaa u muuqataa inay si joogto ah uga walwaleyso inta badan isticmaaleyaasha Nidaamka Android. Sababo badan ayaa jira oo sababa muuqaalka qaladka dhibka badan; Midkood iyo waxa ugu badan ayaa ah in qaabeynta VPN ee taleefankaaga casriga ah uu khaldan yahay ama uu sidoo kale noqon karo soosaarista barnaamij khaldan.
Tabaha khiyaanooyinka ah si ay u tirtiraan farriinta “geedi socodka com.android.phone ayaa joogsaday”
Ha quusan, is-deji, halkan waxaa ku yaal tallooyin kaa caawin kara inaad xalliso dhibaatadan. Marka hore, waa inaad gasho menu taleefankaaga ka dibna riix ikhtiyaarka “Settings”, ka dibna dooro “Taariikhda iyo waqtiga” adigoo xirmay sanduuqa. Haddii tan ka dib, qaladku wali muuqdo, dib u bilaabi mobiilka.
Haddii talooyinkii hore aysan shaqeynin, waxaad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda:
• Ka raadi liiska taleefankaaga, xulo “Settings” ka dibna xulo “Maareeyaha Soo Dejinta”.
• Markaad halkaa joogto, waa inaad nadiifisaa “kaydinka” iyo xogta “maareeyaha soo dejinta”.
• Samee Dib-u-dejinta Warshadda, haddiiba ay dhacdo in farriintu sii muuqato.
Wali dhibaatada wali ma ku jirtaa?, Ka dibna miyaa casriyeynta taleefanka otomaatiga ah. Si tan loo sameeyo waa inaad aaddaa menu, xulo “Settings”, ka dibna geli “Isticmaalka Xogta” oo aad dhaqaajiso ikhtiyaarka “Xaddid xiriirada otomaatiga ah”
Haddii kadib markii aad fuliso hawshan talaabo talaabo ah, khaladku wuxuu u muuqdaa inuu muuqdo, markaa ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad ku soo celiso Smartphone-ka xogtiisa warshad. Waxaad waayi doontaa heerkaaga haatan jira laakiin xallinta dhibaatada. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Soo hel ikhtiyaarka dejinta.
Markaad halkaa joogto, xulo “Kaar” oo riix ikhtiyaarka “Fact data Factory”.
Ugu dambeyntii, ku xaqiiji “Soo celinta taleefanka” oo sug dhowr daqiiqo in hawsha la dhammeeyo.